Sitecore na-eweta Njikwa Ọdịnaya na Broshọ E Bipụtara | Martech Zone
Sitecore na-eweta Njikwa Ọdịnaya na Broshọ E Bipụtara
Mgbasa ozi mmepụta usoro ndụ, na-amalite site na ịchepụta echiche na ịgbatị site na mmepe mmepe na akụkọ ikpeazụ, mpempe akwụkwọ, broshuọ, akwụkwọ ndekọ aha, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ bụ usoro na-agwụ ike ma na-ewe oge.
Sitecore, Onye ndu ahia na ngwanrọ sistemụ njikwa njikwa ihe ntanetị, ewepụla teknụzụ ọhụụ nwere ikike ịgbanwe usoro a maka ihe ebipụta. Sitecore's Adaptive Print Studio ọ bụghị naanị na-enye nzukọ ahụ njikwa dị mma maka usoro ahụ dum, kamakwa ọ nwere ike belata oge ndụ mmepe site na atụmatụ ụbọchị abụọ ruo ihe na-erughị ụbọchị iri abụọ, yana nke ahụ na-ejikwa akụ dị ole na ole karịa na mbụ!
Sitecore Mgbanwe Bipụta Studio awụnyere dị ka ihe nkwụnye na Adobe InDesign ma ghọọ ebe etiti maka Adobe InDesign ọdịnaya niile. Ọ na-enye ebe nrụọrụ weebụ iji kpokọta ndị na-emepụta weebụ, ndị mmepe, ndị njikwa ngwaahịa, ndị ahịa na ndị ọzọ niile metụtara ya na mkpọsa ahụ, na-enyere ndị otu aka ịmekọrịta, njikwa ọtụtụ asụsụ, nchekwa na njikwa arụmọrụ yana nnyefe akwụkwọ siri ike.
Ndị na-emepụta weebụ na-ebugo ọrụ ha, gụnyere nhazi akwụkwọ na ntọala. Thelọ ọrụ ahụ na-adọpụkwa ọdịnaya site na Sitecore's Content Management System (CMS) na InDesign ozugbo, ma na-enye ohere ntanetị n'ịntanetị ọrụ. Ndị njikwa ngwaahịa na-emelite katalọgụ kwa ụbọchị ma na-eme usoro nyocha. Ndị na-abụghị ndị nrụpụta n'ime ahịa, ahịa, ọrụ na ngalaba ndị ọzọ dị mkpa hazie PDF na bipụta ngwaahịa site na okirikiri nhọrọ ukwuu na-ebipụta, ọbụlagodi na-enweghị teknụzụ mara etu esi emepụta akwụkwọ InDesign.
Site na imepụta na ibipụta ihe eji emepụta ngwa ahịa na -emekarị ihe ruru pesenti 30 nke mmefu ego nke ahịa, uru nke teknụzụ a ekwesighi. Oge echekwara na-enyekwa ndị ahịa ohere ịgbasa mkpọsa ha na nso ezigbo oge, dị oke mkpa na asọmpi asọmpi na mmiri dị oke egwu taa ebe mmegharị ngwa ngwa na ngagharị bụ isi ihe ga-eme nke ọma.
Download broshuọ ọrụ ma ọ bụ debanye aha maka a ngosipụta n'ịntanetị.
Tags: agbanwe ebi akwụkwọCMSọdịnaya managementsistemụ ahịa dijitalụsaịtịngwaọrụ
Ndabere: Mmekọrịta Ntanetị na Filekekọrịta Njikwa